Taageerada DACA Deeqaha - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Taageer deeqda waxbarasho ee DACA
Laga soo bilaabo 2013, CIRC waxay bixineysay aqoon isweydaarsiyo ku saabsan hareeraha Colorado si ay uga caawiso xubnaha bulshada inay maraan dhibaatooyinka ka jira dalabka ama cusbooneysiinta DACA Sannadka 2020 oo keliya, waxaan awoodnay inaan ka caawino cusboonaysiinta 275 DACA.
In kasta oo tani ay tahay guul weyn, folx badan oo iska diiwaangeliya aqoon-isweydaarsigan ma xaadiraan sababtoo ah ma awoodaan inay bixiyaan khidmadaha. Si loo dalbado ama loo cusbooneysiiyo DACA, codsadayaashu waa inay bixiyaan $ 502 wadar ahaan ($ 495 khidmadaha, $ 7 dhoofinta).
Taasi waa sababta aan u abuureyno DACA Deeqaha waxbarasho oo ka caawin doonta muhaajiriinta inay sii wadaan inay ugu yeeraan guriga Colorado. Qof kastaa, iyadoon loo eegin soogalootiga ama xaaladda dhaqaale, wuu u qalmaa inuu ka mid noqdo. Maaddaama wareegga cusub ee jeegagga kicinta ay bilaabayaan inay dhigaan wadadooda xisaabaadka bangiyada Mareykanka, waxaan kaa codsaneynaa taageeradaada dhaqaale.
“DACA waxay u adeegtaa aalad muhiim u ah bixinta helitaanka waxbarashada, shaqada, iyo kobaca dhaqaalaha. La'aanteed, shakhsiyaad badan oo xaq u leh ayaa sii wadaya inay ku noolaadaan Mareykanka iyagoo haysta taageero xaddidan. " - Kevin Omaña Mendoza, Maareeyaha Adeegyada Sharciga ee CIRC